खड्क देवी मावि तुन्डाडाको वार्षिकोत्सव सुरु, पुस १० गते समापन हुँदै 1 – ebaglung.com
खड्क देवी मावि तुन्डाडाको वार्षिकोत्सव सुरु, पुस १० गते समापन हुँदै 1
२०७५ पुष ८, आईतवार १९:४४	Top News, थप समाचार
कमल पौडेल, बडीगाड बागलुङ २०७५ पुस ८ । बडीगाड गाउँपालिका वडा नं. १ तुन्डाडा स्थित खड्क देवी माध्यमिक विद्यालये ५८ औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस शुरु भएको छ । आईतबार पहिलो दिनमा प्रावि तहको अन्तरसदनात्मक शव्द दौड, हिसाव दौड, मिठाइ दौड प्रतियोगीता सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै मावि तहको अन्तरसदनात्मक छात्राहरुको ५ सय मिटर दौड, छात्रहरुको ५ किलो मिटर म्याराथुन दौड सम्पन्न भएको छ ।
म्याराथुन दौडमा चुरा वहादुर वराल प्रथम, विजय भुजेल व्दितिय र योगेन्द्र घर्ती तृतिय भएका छन् । त्यस्तै मावि तर्फको निवन्ध प्रतियोगितामा शुक्र सदन प्रथम, दशरथ सदन व्दितिय, र गंगा सदन तृतिय भएका छन् । कार्यक्रममा मावि स्तरीय छात्र छात्राको हाइजम्प र लंगजम्प प्रतियोगिता, मावि तहको बादबिवाद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । बादबिवादमा गंगा सदन प्रथम, धर्म सदन द्धितिय, शुक्र सदन तृतिय भएका छन् । कार्यक्रम संयाजकहरुले संचालन गरेको विद्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिराम भण्डारीले इृबागलुङलाई जानकारी दिए ।
कार्यक्रम १० गते सम्म संचालन हुने र १० गतेको कार्यक्रममा बडीगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहरसिंह पाइजाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सो अवधिभर विद्यालयले विविध प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने शिक्षक कमल खरेलले बताए ।
कार्यालय प्रमुख तथा पत्रकारहरुवीच भेटघाट तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न ! विपद व्यवस्थापन, सुरक्षा, सुशासन कायम गर्नका लागि पत्रकारहरुले पु-याएको योगदान सह्रानीय : प्रजिअ खरेल
बिसौना बाल बिकास केन्द्र लाई NYC द्वारा १५ हजार सहयोग प्रदान !